Qaliinka iyo Daawaynta Indhaha Oo Ka Bilowday Degmada Galaadi. - Cakaara News
Qaliinka iyo Daawaynta Indhaha Oo Ka Bilowday Degmada Galaadi.
Galaadi,(CN) khamis, 11ka February, 2016, Kooxda wareegta qaliinka iyo daawaynta indhaha DDSI ayaa maalintii shalay ka bilaabay xarunta caafimaadka ee degmada Galaadi ee Gobolka Doolo qaliinka iyo daawaynta indhaha taasi oo socondoona mudo 8 maalmood ah.
Waxaana ka faa-iidaysanaya qaliinka bulsho aad u tiro badan oo ku dhaqan degmad galaadi iyo nawaaxigeeda kuwaasi oo iskugu jira kuwa loo samaynayo qaliinka indhaha ah ,qaar la daawaynayo iyo kuwa aragooda lagu saxayo muraayadaha indhaha ka dib marka la cabiro xadiga/degree ay u baahan yihiin.
Maaha degmadii koowaad ee ay kooxdan wareegta ka fuliyaan adeega noocan oo kale ah ee waxay hore uga soo fuliyeen degmooyin badan oo ka mid ah degmooyinka DDSI kuwaasi oo ay ka faa’iidaysteen bulsho badan oo baahi wayn u qabtay helitaanka adeega noocan oo kale ah iyaga oon wax kharash ah kaga bixin bulshada.
Waxaa markhaati madoon ah in qorshihii xukuumada DDSI ee ahaa aas aasida iyo hawlgalin kooxda wareegta ee qaliinka iyo daawayntga indhah ahaa mid loo baahnaa islamarkaana keenay natiijo balaadhan oo ay bulshadu ku tirsatay.
Ugu danbayntii kooxdan wareegta ee qaliinka iyo daawaynta indhaha ayaa waxaa u qorshaysan in ay adeega noocan oo kale ah ka fuliyaan degmooyin badan oo ka mid ah degmooyinka DDSI.